u-Tait ukhiphe izinti ezinhlanu i-SA Emerging yalinganisa i-series inqoba
WINDHOEK: Izinti ezinhlanu ezincomekayo ezikhishwe u-Stefan Tait zisize iqembu lesilisa le-South Africa Emerging ukuthi lilinganise i-series enemidlalo emithathu yosuku olulodwa, ngo-1-1 lidlala ne-Namibia ngokunqoba ngama-runs awu-57 e-Windhoek ngoLwesine.
Lomdlali oshwiba i-pace ngesandla sokunxele uthole u-5/27 futhi wasekwa u-Delano Potgieter (2/23) no-Dayyaan Galiem (2/44) njengoba izivakashi zivikele u-197.
Lokhu emuva kokuthi abashayayo babo bahlulekile ukudlala kahle e-Wanderers lapho u-30 ka-Jason Smith yiwo obumkhulu emuva kokuthi bahlulwe kwi-toss futhi bashayiswe kuqala.
Abashaya phezulu abahlanu bathole izibalo eziphindwe kabili, beholwa ovulayo u-Matthew Breetzke oshaye u-29, kodwa kanye no-Joshua Richards (16), u-Grant Roelofsen (17), u-Kabelo Sekhukhune (20) nokapteni u-Sinethemba Qeshile (19) abakwazanga ukuqhubeka.
Ukuqala kabi kushiye ama-South Africans ku-106/5 phakathi nomdlalo wabo ngaphambi kwemizamo ka-Smith, kanye no-Potgieter (22) no-Galiem (18) babasondeze ku-200 bagcina bekhishwe bonke ngaphansi kwe-par ngo-196 kuma-overs awu-45.5.
u-Jan Nicol Loftie-Eaton ushwibe kahle kwi-Namibia wathola u-3/37.
Iqembu lasekhaya liwuqale kahle umjaho, u-Stephan Baard (37) no-Zane Green (14) benza inhlanganiso ka-54 ngenti evula umdlalo phakathi kwama-overs ayisishagalolunye. Kusukela lapho izivakashi bezingaphezulu.
u-Galiem uhlaselile wakhipha othole ama-runs amaningi kumdlalo u-Baard ngaphambi kokuthi u-JP Kotze (8) akhishwe u-Potgieter.
Emuva kokuthi u-Green akhishwe u-Roelofsen nge-run out, u-Tait uxakazise ama-stumps ka-Gerhard Erasmus (4), u-Craig Williams (3) no-Loftie-Eaton (0) – wabakhipha bonke – kwathi u-Potgieter wakhipha u-Jan Frylinck (1) i-Namibia yazithola ku-80/7.
u-JJ Smit (24) no-Ruben Trumpelmann (28) bahloniphise umphumela nokho iqembu labo kade liphambili kune-run-rate, bakhishwe bonke ngo-139 kuma-overs awu-30.4.
Lokhu kusho ukuthi ilingene ngo-1-1 i-series, umdlalo ozocacisa i-series izoba ngoMgqibelo.
U-Maketa: Uhambo lwe-SA A lusize abadlali bama-Test kakhulu u-Nadine de Klerk uzoba ukapteni weqembu labesifazane le-Emerging kuhambo lwasekhaya bedlala ne-Bangladesh Abanelanga ubuqhawe kwa-Jansen ukunqobisa i-SA Emerging i-All-rounder u-Simmonds usize i-SA Emerging inqobe okokuqala idlala ne-Sri Lanka u-Van Tonder utholela i-SA Emerging ukunqoba okukhulu Umdlalo wesibili we-‘A’ tour ongeyona i-Test yangempela uphele ngokulingana Imvula ibenesandla kusuku lwesithathu eNdiya Abavulayo bayimisa kahle i-India A u-Conrad uyajabula ngalapho i-SA ‘A’ ibheke khona u-Zondo ulungele i-A Triangular Series enenselelo